Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Airlines enina hafa manerantany no mampihatra IATA Travel Pass
Airlines • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Etihad Airways, Jazeera Airways, Jetstar, Qantas, Qatar Airways ary Royal Jordanian, dia hampihatra ny IATA Travel Pass amin'ny alàlan'ny fizotran'ireo zotram-piaramanidina.
Betsaka ny kaompaniam-pitaterana miditra ao amin'ny Emirates Airline amin'ny maha mpisava lalana IATA Travel Pass.
Ny fanambarana, natao teo ankilan'ny Fihaonambe Iraisam-pirenena IATA faha-77 notontosaina tany Boston, dia taorian'ny fanandramana lehibe iraika ambin'ny folo volana nataon'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka 76.
IATA Travel Pass dia fampiharana finday afaka mandray sy manamarina karazana valin'ny fitsapana COVID-19 sy mari-pankasitrahana vaksinina niomerika.
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) nanambara fa ny Etihad Airways, Jazeera Airways, Jetstar, Qantas, Qatar Airways ary Royal Jordanian, dia hampihatra ny IATA Travel Pass amin'ny alàlan'ny fizotran'ireo zotram-piaramanidina. Ireo sidina dimy ireo dia manatevin-daharana ny Emirates Airline amin'ny maha mpisava lalana fampiharana IATA Travel Pass.
Ny fanambarana, natao teo amin'ny sisin'ny faha-77 Iată Fihaonambe maneran-tany atao any Boston, aorian'ny fanandramana lehibe iraika ambin'ny folo volana ataon'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka 76.
“Taorian'ny fitsapana nandritra ny volana maro, IATA Travel Pass miditra amin'ny dingana fandidiana izao. Ny fampiharana dia nanaporofo ny tenany ho fitaovana mahomby amin'ny fitantanana ny fikorontanan-tsaina momba ny fahasalamana momba ny dia izay takian'ny governemanta. Ary latsa-danja lehibe amin'ny fahatokisana fa ny sasany amin'ireo marika fiaramanidina malaza indrindra manerantany dia hanome izany ho an'ny mpanjifany mandritra ny volana ho avy, ”hoy i Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA.
Ny fampiharana dia manolotra fomba azo antoka sy azo antoka ho an'ireo mpandeha mba hanamarina ireo fepetra takiana amin'ny diany, hahazo valim-panadinana ary hizaha ny taratasy fanamarinam-panafody, hanamarina fa mahafeno ny toerana ilaina sy ny fitaterana izany ary mizara izany tsy misy ezaka amin'ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana sy ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka alohan'ny hiaingany. Izany dia hialana amin'ny filaharana sy ny fitohanana amin'ny fanamarinana antontan-taratasy - ho tombontsoan'ny mpandeha, seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina ary governemanta.
IATA Travel Pass dia fampiharana finday afaka mandray sy manamarina karazana valin'ny fitsapana COVID-19 sy mari-pankasitrahana momba ny vaksinina niomerika. Amin'izao fotoana izao ny mari-pankasitrahana vaksinina avy amin'ny firenena 52 (maneho ny loharanon'ny 56% amin'ny dia an-habakabaka eran-tany) dia azo tantanana amin'ny alàlan'ny fampiharana. Hiakatra ho firenena 74 izany, maneho ny 85% n'ny fifamoivoizana manerantany, amin'ny faran'ny volana novambra.
IATA Travel Pass dia antenaina handray anjara lehibe amin'ny fanarenana ny indostrian'ny seranam-piaramanidina amin'ny fiantraikan'ny COVID-19. Vahaolana nomerika hitantanana ny antontan-taratasin'ny mari-pahaizana momba ny fahasalamana amin'ny fitsangatsanganana COVID-19 dia hanohana ny fiverenana mitsidika rehefa misokatra indray ny sisintany. Miaraka amin'ny governemanta marobe miantehitra amin'ny kaompaniam-pitaterana antontan-taratasy COVID-19 manamarina izany dia ho zava-dehibe amin'ny fisorohana ny filaharana sy ny fitohanana amin'ny fisavana rehefa mitombo ny dia.